GUOWANG R130 AUTOMATIC DIE-CUTTER na-enweghị isi
Sistemụ mkpọchi pneumatic na-eme ka ọ dị mfe igbachi na ntọhapụ nke ịcha chase na ịcha efere.
Pneumatic ebuli elu efere maka mfe mmịfe n'ime na pụta.
Sistemụ nke etiti na ịchụ igbu egbu na mgbanwe micro transversal na-eme ka ndebanye aha ziri ezi na-ebute mgbanwe ọrụ ngwa ngwa.
Ọnọdụ ziri ezi nke ịcha chase na-ejikwa nkenke ihe mmetụta anya nwere ngwaọrụ nlele akpaka.
Ịcha chase ntụgharị ngwaọrụ.
Siemens isi moto nke Schneider inverter na-achịkwa.
Isi feeder dị elu
Sistemụ ahịrị etiti
Mkpọchi pneumatic anwụ chase
Nri na nnyefe anaghị akwụsị akwụsị
Ihuenyo mmetụ abụọ maka ịrụ ọrụ dị mfe
HT500-7 ductile nkedo ígwè
Isi nri nri dị elu, 4 sucker na onye na-ebugharị 4
Ngwa ihe eji ebu ụzọ, nri anaghị akwụsị akwụsị Max.Okpokoro elu 1600mm
AIR Pump German BEKER
Okpokoro nri Nitta ebuga eriri igwe anaghị agba nchara mkpọda table
Sistemụ ahịrị ahịrị ebe a na-adọpụpụ pneumatic elu chase na-ebuli cam dị iche iji jikwaa ọnọdụ maka elu, etiti, n'okpuru ịchụ Ọdịmma ngwaahịa dị elu site na iwepu akpaka.
AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE Servo moto si Japan FUJI Nrụgide nwere ike gbanwee na ihuenyo mmetụ 15 ", na-edozi nnabata ruo 0.01mm Max.300T nrụgide.
LED TOUCH SCREEN MONITOR ●15" elu definition LED ihuenyo mmetụ , onye ọrụ nwere ike ịhụ ntọala niile na ọnọdụ dị iche iche, belata oge maka mgbanwe ọrụ ma melite arụmọrụ ọrụ.
Sistemụ mmanye mmanye akpaaka na-achịkwa nke kọmpụta na-ejikwa Mfe
Sistemụ ahịrị ahịrị ebe etiti anwụ anwụ maka mgbachi elu na nke ala anwụ anwụ chase ịgbanwee chọpụta efere akpọchiri n'ọnọdụ ziri ezi.
Ebupu oke.Okpokoro elu 1350mm nnyefe anaghị akwụsị akwụsị
Onye na-enye nri dị elu nke emere na China nke nwere 4 suckers maka iweli akwụkwọ na 4 suckers maka mbugharị akwụkwọ na-eme ka akwụkwọ nri kwụsiri ike na ngwa ngwa.Ogologo na akụkụ nke suckers na-adị mfe mgbanwe iji dobe mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ.
Mechanical ihe nchọpụta mpempe akwụkwọ abụọ, ngwaọrụ na-ewepụ mpempe akwụkwọ, ikuku ikuku na-agbanwe agbanwe na-eme ka a na-ebufe mpempe akwụkwọ na tebụl belt nke ọma na nke ọma.
Mgbapụta mgbapụta sitere na German Becker.
Enwere ike idozi ikpo mpụta site na moto maka inye nri mpempe akwụkwọ ziri ezi.
Pre-piling ngwaọrụ na-eme ka ndị na-adịghị akwụsị nri na elu ikpo (Max. ikpo elu bụ ruo 1600mm).
Enwere ike ịmepụta ikpo zuru oke na pallets nke na-agba ọsọ na okporo ígwè maka ịkwakọba ihe.Nke a na-enye aka dị ukwuu n'ịmepụta nke ọma ma mee ka onye ọrụ bugharịa ikpo a kwadebere ka ọ bụrụ nri nke ọma na nke dabara adaba.
Otu ọnọdụ njikọ aka pneumatic arụ ọrụ n'ibu ipigide insures mbụ mpempe akwụkwọ mgbe ọ bụla re-mmalite nke igwe na-mgbe niile nri n'ihu lays maka mfe, oge na-azọpụta ihe onwunwe na-eme ka-njikere.
Enwere ike ịgbanye oghere n'akụkụ ozugbo n'etiti ọnọdụ ndọpụta na ntinye n'akụkụ abụọ nke igwe naanị site na ịgbanye ihe mkpuchi na-enweghị ịgbakwunye ma ọ bụ wepu akụkụ.Nke a na-enye mgbanwe maka nhazi ụdị ihe dị iche iche: n'agbanyeghị ma akara ndekọ dị n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri nke mpempe akwụkwọ.
N'akụkụ na n'ihu lays nwere nkenke ihe mmetụta anya, nke nwere ike ịchọpụta agba gbara ọchịchịrị na mpempe akwụkwọ plastik.Enwere ike imezi mmetụta uche.
Ngwa anya sensọ na akpaka nkwụsị usoro on nri table-enyere gị aka ebuli usoro nlekota oru- maka keukwu àgwà akara n'elu dum mpempe akwụkwọ obosara na akwụkwọ jam.
Ọrụ panel maka nri akụkụ dị mfe ịchịkwa nri usoro na LED ngosi.
Njikwa draịva iche maka ikpo isi na ikpo inyeaka
PLC na igwe eletrọnịkị maka njikwa oge
Ngwa mgbochi mgbochi nwere ike zere mmebi igwe.
Japan Nitta na-ebufe eriri maka feeder na ọsọ bụ mgbanwe
Ngalaba na-egbu egbu
Ọnọdụ ziri ezi nke ịcha chase na-ejikwa nkenke ihe mmetụta anya nwere ngwaọrụ nlele akpaka
Ịcha chase ntụgharị ngwaọrụ
Micro-ngbanwe nke ọnwụ ike (nrụgide ziri ezi nwere ike ruo 0.01mm, Max.Nrụgide anwụ anwụ nwere ike iru ton 400) site na ngwa worm nke servo moto na-ebugharị ma na-achịkwa ngwa ngwa site na ihuenyo mmetụ inch 15.
Crankshaft bụ nke 40Cr ígwè.
HT300 ductile ígwè maka igwe okpokolo agba na platen
Usoro 7 nke gripper mmanya nwere grippers nke aluminom alloy dị arọ na nke na-adịgide adịgide nwere akwa mkpuchi siri ike na imecha anodized na-eme ka ndebanye aha akwụkwọ ziri ezi na agbanwe agbanwe.
Ogwe gripper dị elu si Japan nwere ogologo ndụ
Ogwe gripper emebere nke ọma anaghị achọ oghere maka nkwụghachi iji jide n'aka na ndebanye aha akwụkwọ ziri ezi
Ịcha efere dị iche iche ọkpụrụkpụ (1pc nke 1mm, 1 pc nke 4mm, 1 pc nke 5mm) maka mfe ọrụ-agbanwe.
Renold yinye dị elu nke sitere na England nwere ọgwụgwọ agbatịburu ụzọ na-eme ka nkwụsi ike na izi ezi n'ikpeazụ.
Sistemụ mbanye index nrụgide dị elu maka njikwa idobe mmanya gripper
Ngwaọrụ nchebe oke ibu nwere ihe mgbochi torque na-emepụta ọkwa nchekwa kachasị elu maka onye ọrụ na igwe.
Akpaaka lubrication na jụrụ oyi usoro maka isi mbanye na akpaka mmanu maka isi yinye.
Ikpokoro ọrụ na njikwa kpo oku;1 igbe ngwaọrụ na ntuziaka ọrụ.
Nke gara aga: GUOWANG C106 AUTOMATIC DIE-CUTTER ENWEGHỊ achụpụ
Osote: GUOWANG R130Q AUTOMATIC DIE-CUTTER nwere nkesa
Igbe INDEX TAIWANUSA Synchronical BeltỤlọ ọrụ SIEMENS MOTOR
UK Renold ChainJAPANESE GRIPPERBecker mgbapụta
Ọkọlọtọ BOARD& STRIPPING BOARD
Ahịhịa breeki na-agbanwe agbanwe nke moto AC na-achịkwa na-enyere aka ibupu akwụkwọ site na gripper na ikpokọta akwụkwọ n'ọsọ dị elu yana nhazi zuru oke.
Okpokoro nnyefe dị elu ruru 1050mm.
Ngwa fotoelectric na-egbochi ịrịgo elu na nrịda nke ikpo akwụkwọ nnyefe
Enwere ike ịgụta ikpo site na ihe mmetụta anya (ọkọlọtọ).
Enwere ike ịhazi igwe ahụ dum site na nyocha mmetụ inch 10.4 n'akụkụ azụ
A haziri akwa nnyefe inyeaka maka nnyefe anaghị akwụsị akwụsị.
Ihe nchọpụta eletrọnịkị, micro switched na sel fotoelectric nke PLC na-achịkwa na igwe dum
Omron eletrọnịkị cam mgba ọkụ na koodu
Enwere ike ịrụ ọrụ niile dị mkpa site na 15 na 10.4 inch touch monitor.
Nchekwa PILZ dị ka ọkọlọtọ na-eme ka ọkọlọtọ nchekwa kachasị elu.
Mgbanwe n'etiti mkpọchi mezuru CE chọrọ.
Na-etinye akụkụ eletriki gụnyere Moeller, Omron, Schneider relay, AC contactor na ikuku ikuku iji mesie nkwụsi ike n'ogologo.
Ngosipụta mmejọ akpaaka yana nyocha onwe ya.
Akwụkwọ kaadiboodu dị arọ siri ike
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere ọkara siri ike nke plastik
Ihe nlele ngwa
GUOWANG R130Q AUTOMATIC DIE-CUTTER nwere nkesa
Century MWB 1450Q (ya na nkewa) Semi-Auto Fl...
GW abụọ ọdụ anwụ anwụ-ịcha na foil stamping...